musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » India Tourism Inoodzwa muNew Scheme Level
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • Investments • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Ipo iyo Indian Association yeVashanyi Vanoshanda (IATO) ichitambira chiziviso cheKuburitswa kweSevhisi Kunze kwenyika kubva kuIndia Scheme (SEIS) Mapepa evashanyi vanoshandira gore remari 2019-20, panguva imwechete zvinonyadzisa kuti yakadzikiswa. kusvika ku5 muzana kubva pa7 muzana.
IATO iri kukurudzira hurumende kuti idzore iyo SEIS kubatsirwa kudzokera kune zvayaive gore rapfuura.
Izvo zvakakumbirwa kukwidza chikamu kusvika gumi, zvisinei, chakadzurwa ne10 muzana panzvimbo.
Iko kuderedzwa kwepesenti kusvika ku5% kunokanganisa vashoma uye vepakati vashanyi vekushanya, uku vachibata maRs. 5 macrores anokanganisa zvakanyanya vashanyi vashanyi.
"Mwaka nehafu wapfuura anga ari mamwe ematanho akaipisisa kuvashanyi, uye nekuda kwekuomerwa kwakatsungirirwa, zvinokurudzirwa kuti hurumende idzore rubatsiro rweSEIS kusvika muzana muzana sezvavakabhadharwa gore rapfuura." , ”Akadaro IATO Mutungamiri Rajiv Mehra.
Kwemwedzi gumi nesere yekupedzisira, vafambi vekunze vakapinda vaive vangangoita zilch mari nevakawanda vavo vachipeta mabhizinesi avo. Nekuda kweizvozvo, iko kubatsirwa kweSEIS kwakamirirwa kwenguva yakareba, sezvo izvi zvaizopa rubatsiro rwemari rwunobatsira chikamu chekushanya pamusoro peiyi COVID-18 coronavirus dambudziko.
Munguva yekutaurirana, hurumende yakakumbirwa kuti iikwidze kusvika gumi muzana seyimbo-imwe chete, zvisinei, kudzikiswa kwebhenefiti nekuiisa kumamirioni mashanu macrores kunoodza moyo uye hurumende inokumbirwa kuti iikwidze kusvika ku10 muzana uye bvisa capping yeRs. 5 macrores angangoita eindasitiri yekushanya uye yekugamuchira vaeni.
"Tinovimba kuti hurumende ichateerera chikumbiro chedu," vakadaro VaMehra.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kudzikiswa muzana kusvika pa5% kunokanganisa vashoma uye vepakati vashanyi vekushanya, uku vachitora maRs. 5 macrores anokanganisa zvakanyanya vashanyi vashanyi.
Tourism yakapa zvakanyanya kuhomwe uye yanga iri mushandirwi mukuru zvakare. Mumamiriro ezvinhu anoshungurudza seizvi, chikamu chekushanya chinotsvaga rubatsiro kubva kuhurumende kuti chirarame uye kumutsidzirwa.
Iwo Anotengesa kunze kwenyika kubva India Scheme (SEIS) inovavarira kusimudzira kuburitsa kunze kwemasevhisi kubva kuIndia nekupa basa chikwereti chikwereti kune vanofanirwa kutengesa kunze kwenyika. Pasi pechirongwa, vanopa rubatsiro, vari muIndia, vaizopihwa mubairo pasi pechirongwa cheSEIS, kune vese vanokodzera kutumira mabasa kubva kuIndia. Muchikamu chino, isu tinotarisa paSevhisi Kunze kwenyika kubva kuIndia Scheme zvakadzama.
Jamaica Inogashira Itsva Sevhisi kubva kuAmerican Airlines
Mazororo emahombekombe ndiyo inofarirwa sarudzo yeBrits
Iyo Bahamas Inozivisa Kupinda Kwayo kuWTM London ...
Divers Ratidza Kufarira Kwakanyanya muBahamas paDEMA Show
Turkey inotyisidzira kudzinga US uye mamwe mamishinari gumi nemapfumbamwe
Vashanyi vekuHawaii vanosvika uye kushandisa mari kwaive pasi mu...
Southwest Airlines inotanga kuongorora muBiden-kutuka ...
IMEX America Launch: Nyowani Simba uye Solidarity
Kisimusi uye Gore Idzva mazororo ekutengesa mahotera
Delhi Inonanga Kuno Yakaderedzwa Nhamba ye5-Star Hotels
Air Tanzania inoraira mutyairi mutsva weBoeing uye mutyairi ...
Harley-Davidson Anorova Big Win
Qatar Airways Nekukurumidza Inomisa Ndege kubva kushanu...